သမ္မတÇalışkanအထွေထွေမန်နေဂျာYazıcı | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီသမ္မတÇalışkanသည်အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့ရောက်ရှိသည်
21 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, တူရကီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က
အထွေထွေဥက္ကchairman္ဌ, အထွေထွေ, ပရင်တာသို့သွားရောက်ခဲ့သည်
Kenan Çalışkan, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - Sen၊ TCDD Taşımacılık A.Ş. သူသည်သူ၏ရုံးခန်းရှိ Kamuran Yazıcı၏အထွေထွေမန်နေဂျာကိုသွားပြီးရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အင်တာဗျူးများတောင်းခံခဲ့သည်။
TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran Yazıcıကသမ္မတÇalışkanအားပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်မြှင့်တင်ရေးအင်တာဗျူးများကိုကျင်းပလို့မရပါဘူး။
အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıကထပ်မံပြောကြားသည်မှာ အကယ်၍ တားမြစ်ချက်များသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုကြာပါကဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်အင်တာဗျူးများပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်သမ္မတıalışkanသည်အဖွဲ့အစည်းမှလုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ၀ န်ထမ်းများထံမှတောင်းဆိုချက်များကိုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လုံ့လဝရိယအလုပ် Karaman မြန်နှုန်းရထားလမ်းUlukışlaအတွက်စတင်
ကြယ်ပွင့်မှ General Manager Datei ငါ၏အလည်ပတ်သူများ (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
CER အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာလစ်ဘာအတိုးနှုန်း Lochman, ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Apaydınလည်ပတ်ခဲ့
RAI ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ General Manager က Kurt Veys ဆီ
TÜDEMSAŞ Khan ကအထွေထွေ Manager ကိုBaşoğlu Forge ကုမ္ပဏီလည်ပတ်ခဲ့
Bayırköyအဆိုပါ TCDD လက်ထောက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးလာရောက်လည်ပတ်
TCDD လက်ထောက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Korkmaz ခရီးစဉ်၏စောင့်ရှောက်သူများကသမ္မတ
Arikan, တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Sen Views စာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်